संस्था र लोकतन्त्र मजबुद बनाउन लाग्नेहरु सबै युवा हुन्
(सम्पादकीय नाेट : १४औँ महाधिवेशनको काउन्टडाउन सुरु हुँदै गर्दा यतिबेला नेपाली कांग्रेसभित्र राजनीतिक सरगर्मी बढेको छ । पार्टी सभापतिदेखि केन्द्रीय समिति, प्रदेश, जिल्ला हुँदै वडास्तरसम्म यतिबेला कांग्रेसलाई महाधिवेशनले छोपेको छ ।
फरकधारको यो शृंखलामा हामीले कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुसँग महाधिवेशनपछिको कांग्रेस कस्तो हुनुपर्छ ? र, युवा नेतृत्वको सम्भावना के छ ? भनी सोध्नेछौँ । यसै क्रममा नेपाली कांग्रेस बाग्लुङका सभापति दीपे​​न्द्रबहादुर थापालाई हामीले यो शृंखलामा प्रस्तुत गरेका छौँ ।)
नेपाली कांग्रेसको अबको नेतृत्व सबैलाई मिलाएर लानसक्ने खालको हुनुपर्छ । लोकतन्त्रलाई मजबुद बनाउन सक्ने, राष्ट्रलाई समुन्नत बाटोमा डोहोर्‍याउने खालको नेतृत्व हामीले खोजेका छौं । राष्ट्रिय रुपमा एउटा समझदारी बनाउन सक्ने, पार्टीहरुमा एकता कामय गर्नसक्ने, विदेशी दातृ राष्ट्र तथा संस्थाहरुसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउन सक्ने नेतृत्वको खाँचो छ ।
१४औं महाधिवेशनमा युवाहरुको अहम भूमिका हुनुपर्छ भन्नेमा दुईमत छैन । युवा भन्दैमा उमेरले युवामात्रै भएर भएन । हुनुपर्‍यो के भने, युवाहरुको शक्ति, क्षमता र दक्षता पनि सशक्त हुनुपर्छ । परिपक्व मानिसहरुले पनि विचारमा युवापन ल्याउँछ भने त्यसलाई युवा मान्न सक्नुपर्छ । उमेरले युवा छ तर उसँग कुशल नेतृत्वमा हुनपर्ने गुण छैन भने त्यो युवामात्रै भनेर पनि हुँदैन । मान्छे ८० वर्ष भइसक्यो तर उसको क्रियाशीलता युवाको भन्दा बढी छ भने युवामै उसलाई गन्नुपर्छ । तर, १८ वर्षे युवा छ तर ७० वर्षजस्तो जाँगर नभएको भयो भने त्यसलाई स्वीकार्न सकिँदैन ।
संस्थाका लागि अत्यन्तै उर्जावान भएर, संस्था भएन भने हामी रहन सक्दैनौं भन्ने सोच बनाएर, संस्था र लोकतन्त्रलाई कसरी मजबुद बनाउन सकिन्छ भनेर लाग्नेहरु सबै युवा हुन् । काम र व्यवहारले उसको परिपक्वता हेरेर युवाहरुको मूल्यांकन हुनु अबको कांग्रेसका लागि अत्यावश्यक छ ।
परिवारवादकै समस्या अझै पार्टीमा छ भन्न मिल्दैन । कहिलेकाँही के हुँदो रहेछ भने घर बनाउँदा कसैले जग खन्दिएको छ भने घर बनाउनका लागि सहज हुने रहेछ । कसैले जग खन्दिएको छैन भने फेरि तला थप्न गाह्रो हुन्छ । त्यसकारण हिजो जो लोकतन्त्र र राष्ट्रका लागि जेल नेल र ज्यानकै आहुती दिए उनीहरुका सन्तानहरु छिटो अगाडि आउनसक्छन् ।
उनीहरु अघि आए भन्दैमा परिवारवाद हाबी भयो भन्नपनि मिल्दैन । काम गर्ने मान्छेहरु परिवारभित्र वा बाहिरको जे भएपनि संस्थाको लागि मरिमेटेर लाग्नेहरुको मूल्याङ्कन हुनुपर्छ । प्रवृत्ति चाहिँ के देखिएको छ भने, मै खाउँ मैं लाउँ । यो सिद्धान्तबाट बाहिर हटेर हामी सबै मानव हौं सबैका लागि हामीले केही गर्नुपर्छ भन्ने भावना राख्नुपर्छ । यस्ता सोच राख्ने मान्छेहरु अगाडि बढ्छन् भने त्यस्ता साथीहरुलाई अगाडि बढाउन पार्टी कार्यकर्ताको कर्तव्य हो । हामीले कुनै व्यक्तिको क्षमतालाई चिनेर अघि बढ्न सक्यौं भने अवश्य पनि परिवारवको मात्र नभएर राष्ट्रकै हित गर्छ भन्ने मान्यता राख्नुपर्छ।
नेपाली कांग्रेस एउटा वैधानिक संकटमा आजको दिनमा छ । त्यसमा पनि वर्षातको समय र महामारीले आक्रान्त पारेको समय छ । अहिले सत्तामा पुगेको पार्टी भएकाले अत्यन्तै कठिन छ । सरकारमा पुगेको पार्टी जिम्मेवार नभएर महामारी फैलाउँदैछ भन्ने कुराको पनि ध्यान पार्टीका नेतृत्वले दिनुपर्छ । भेला, सभा गोष्ठी गर्नपर्ने कारणले अधिवेशन गर्दा कांग्रेसले महामारी फैलाउने भयो भन्ने कुरा छ । लोकतान्त्रिक पार्टी भएकाले अधिवेशन पनि समयमै गर्न सकेन भनेर पार्टीभित्र र बाहिरबाट आवाज आएका छन् । पार्टीभित्र गर्नपर्ने आवधिक निर्वाचन गर्नैपर्ने बाध्यता कांग्रेसलाई छ ।
कांग्रेसको वैधानिकता र महामारीको अवस्थालाई हेरेर दुवैलाई जोगाउनपर्नेछ । किनभने आफ्नै पार्टी अवैध भयो भने लोकतान्त्रिक पार्टीले सबैतिरबाट आक्षेप खेप्नुपर्छ । सत्तामा पुगेको पार्टीले सामाजिक दुरी कायम नगर्‍यो भने फेरि जनताको जिउधनप्रति गम्भीर भएन भन्ने आक्षेप खेप्नुपर्छ । यी दुवै समस्याकाबीच यतिबेला कांग्रेसले सन्तुलन मिलाएर नदी पार गर्नुपर्ने अवस्था छ । यो कांग्रेसको बाध्यता पनि हो ।
जसरी कांग्रेसमा वैधानिकता संकट आयो, भोलिका दिनमा नेतृत्वले समयमै सोच्नुपर्छ । जतिबेला अप्ठेरो पर्‍यो त्यतिबेलामात्र नेतृत्वले सोचेकोजस्तो देखियो । समयमै महाधिवेशन गर्ने कुरामा पनि कांग्रेसको इतिहासमा चाँही ४ वर्षमा महाधिवेशन गर्नपर्ने भएपनि हुन सकेन । अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।
अहिलेको नेतृत्वमा पनि ४ वर्षमै गर्ने खाका पहिल्यै दिएको भए सजिलो पनि हुन्थ्यो । ४ वर्ष सुरु हुँदै गर्दा महामारीको यो अवस्था आयो । त्यसकारण पनि समयमै अधिवेशन गर्न सकेन । अब आउने नेतृत्वले त्यसमाथि पनि सोच्नपर्ने हुन्छ । समग्र राष्ट्रको लागि अहिले जसरी कम्युनिस्ट पार्टीलाई सरकारमा पुर्‍याए । जनताप्रति उत्तरदायी नभएर एउटै हड्डीमा दुईवटा कुकुरले लुछाचुँडी गर्दा जनताले दिएको म्यान्डेट ३ वर्षमै भताभुङ्ग भयो । यो स्थितिबाट जिम्मेवार भएर कांग्रेसले सोच्नुपर्छ ।
यो राष्ट्र जसरी २४० वर्षको राजसंस्था गइसकेपछि अभिभावकबिहीन थियो । तर, अहिले अभिभावकको रुपमा कांग्रेस नै अघि लागेको छ । त्यो अभिभावकत्व कांग्रेसले गर्छ भन्नेखालको कुरा कांग्रेसको अबको नेतृत्वले बुझ्नुपर्छ ।
पार्टी र सरकारको नेतृत्वमा फरक–फरक व्यक्ति हुनुपर्छ –मुगु सभापति
प्रकाशित मिति : भदौ २४, २०७८ बिहीबार १३:३४:५, अन्तिम अपडेट : भदौ २४, २०७८ बिहीबार १३:५१:५५